छैन त लामो पहिले रूसी स्क्रीन मा फिलिम बाहिर शीर्षक आए "को पनडुब्बी K-129 को शोकमा"। यस चित्रकला एक वृत्तचित्र रूपमा अवस्थित र मार्च 1968 मा भयो कि उदास घटनाहरू बताउनुभयो थियो। जो पछि शीत युद्ध को सबै भन्दा अप्रिय घटनाहरू रूपमा मानिन्छ भए त गोप्य सञ्चालन भनिन्छ, - "परियोजना" Azorian ""। बस त संयुक्त राज्य अमेरिका को नौसेना सागर जलमग्न सोभियत पनडुब्बी K-129 को तल गर्यो।
को बीसौँ शताब्दीमा पनडुब्बी जहाजहरू को मृत्यु, सायद, असामान्य छैन थियो। प्रशान्त पानी को उत्तरी भाग मा पनडुब्बी जहाजहरू को इतिहास मा सबै भन्दा प्रसिद्ध को रहलपहल ढाँट्छन्। लामो समय को लागि, यी घटनाहरू बारेमा जानकारी यो sank जहाँ पनि सही स्थान, मौन राखिएको थियो गोप्य। बस लाग्छ: एक विशाल आणविक पनडुब्बी नब्बे-आठ सोभियत अफिसरहरू हत्या अवस्थित भएनन्।
अमेरिकी समाचार एजेन्सीहरूले, सबै भन्दा नवीन उपकरण संग, एक डुङ्गा फेला पार्न र घटनाको पछि पहिलो दुई हप्ता अन्वेषण गर्न व्यवस्थित। र अगस्ट 1974 मा, कश्मीर-129 तल पायो।
1968 बस शुरू भएको छ, यार्ड एक ठण्डा फरवरी थियो। आगामी मिशन चुपचाप र घटना बिना पारित थियो बाहेक त्यहाँ समस्या को कुनै संकेत थिए। त्यसपछि कामचट्का किनारा मा एक सैन्य आधार को गस्ती समारोह सीमाहरु पनडुब्बी K-129 आफ्नो अन्तिम यात्रा गए। तीन बैलिस्टिक मिसाइलहरु, को आणविक शुल्क मा torpedoes एक जोडी - एक अनुभवी र सक्रिय - पानी जहाज धेरै शक्तिशाली र चालक दल थियो। पहिलो रैंक को कप्तान - उहाँले पनडुब्बी Kobzar वी आई आज्ञा दिनुभयो। यो मानिस फरक शटर गति, एक महान अनुभव र गम्भीर मनोवृत्ति थियो।
यो पनडुब्बी को प्रस्थान को समय मा वस्तुतः कुनै समय समुद्रहरू को expanses मार्फत लामो यात्रा पछि आराम गर्न भने हुनुपर्छ। असामान्य नाम अन्तर्गत सहरमा जरायो Guba पनडुब्बी हालै आइपुगे। गरेका गरिएको गर्नुपर्छ भनेर राम्ररी मरम्मत, गरेको यो थियो, र यो लामो र थकित पौडी पछि आराम गर्न आवश्यक छ रूपमा चालक दल एक निराश अवस्थामा, असमर्थ थियो। तर त्यहाँ अन्य सबै पनडुब्बी जहाजहरू तयार k-129 को आदेश धेरै प्रश्न छैन, किनभने तर बस सीमाना गश्ती गर्न गएका, अझ मिशन लागि थिए, कुनै विकल्प थियो। को पनडुब्बी साथै मिसाइल जटिल डी-4, यो अन्य जहाजहरू उच्च छ भन्ने चाहनुभएको जो स्थित थियो। बाटो गरेर, चालक दल को अधिकारीहरु को धेरै केही पनि बिदामा घर शीर्षक, रूस लागि बायाँ, छुट्टी मा जारी गरियो। पूर्ण शक्ति कमान्डर मा एक टोली इकट्ठा असफल भयो। तर, हामीलाई थाहा छ को रूप मा, शुल्क थिए कि ती मानिसहरू शाब्दिक मेरो जीवन सुरक्षित गरियो।
सबै गलत भयो
त्यहाँ केही थियो, अन्य जहाज मा सेवा मानिसहरूलाई प्रयोग आदेश मानिसलाई, र पौडी शुरुआती को शुल्क टाइप थियो। सबै शुल्क को पहिलो दिन देखि गलत भयो। यो सैन्य आधार आदेश मा पनि चालक दल सूची, जहाजको छाप को कप्तान द्वारा प्रमाणित समाप्त थिएन, कि र वास्तवमा वी आई Kobzar आफ्नो thoroughness लागि ज्ञात थियो विचारणीय छ। कागजात शोकमा भयो जब कागजात लागि क्रोधोन्मत्तता में खोजी गर्न थाले, तर केही फेला परेन। यो नौसेना बस हुन सक्छ जो लापरवाही, को नसुनिएका छ! जरायो Guba त्यहाँ व्यवसायि, व्यापार मा सबै भन्दा राम्रो थियो भन्ने तथ्यलाई लागि प्रसिद्ध। र अझै ...
यो मार्ग मा एक मोड, यो मानक प्रक्रिया हो थियो किनकी आधार मा एक पनडुब्बी देखि आठौं मार्च, छोटो संकेत आउन थियो। तर यो पछि थिएन, अलार्म कर्तव्य थियो त्यसै दिन। पहिलो रैंक को कप्तान यस्तो गल्ती अनुमति सकेन।
को पनडुब्बी K-129 सबै शक्तिहरू उनको खोज्न पठाइयो किनभने सम्पर्क छैन, सबै कामचट्का Flotilla र उड्डयन गरिएका सक्रिय खोज सञ्चालन संलग्न। पनडुब्बी जीवनको कुनै संकेत देखाए। को सोभियत संघ को प्रशान्त बेडा को निरर्थक काम दुई हप्ता पछि पोत कुनै थप छ भनेर बुझे। त्यतिबेला भइरहेको र अमेरिकी सैन्य रुचि राख्नुहुन्छ छ के रेडियो मा हल्ला गरेर आकर्षित। तिनीहरूले पनि समुद्र छालहरू को सतह मा एक तेल slick फेला परेन। यो सामाग्री को विश्लेषण यो साँच्चै सोभियत पनडुब्बी बाहिर बग्ने गरेको छ जो एक सौर तरल छ, कि देखाए।
त्यतिबेला समाचार सम्पूर्ण विश्व समुदाय स्तब्ध। यो यात्रा जीवनमा पहिलो गम्भीर चुनौती थियो जसलाई लागि नब्बे-आठ साहसी सोभियत अफिसरहरू, अनुभवी नाभिकहरु, जवान मान्छे, राम्रो, राम्रो-सुसज्जित पनडुब्बी K-129 - सबै एक समयमा मारे। शोकमा को कारण सम्भव तल देखि डुङ्गा उचाल्न उपकरण स्थापना गर्न थियो अवस्थित छैन। समय, सबै खोज सञ्चालन बन्द काता थिए र एक समय भूल, त्यो सोच धेरै अवस्थामा रूपमा लागि डुङ्गा मा, जहाज sank गर्दा, चालक दल को लागि एउटा ठूलो गम्भीर समुद्र हुनेछ। प्रशान्त महासागर मा Fatalities पनडुब्बी जहाजहरू केहि दुर्लभ भएको छ।
के भयो को संस्करण
निस्सन्देह, त्यतिबेला भइरहेको छ के को सबै भन्दा वर्तमान संस्करण अमेरिकी नौसेना को षड्यन्त्र थियो। यो प्रशान्त पानी मा समय मा कर्तव्य पनि हो जो बैलिस्टिक मिसाइलहरु, एक पनडुब्बी थियो - समाजमा यी विचार को उपस्थिति र प्रेस sonorous नाम "Swordfish" संग बारेमा अमेरिकी जहाज जानकारी फैलाउन भन्ने तथ्यलाई गर्न योगदान। यसलाई विशेष केही जस्तो थियो: कर्तव्य - र अमेरिका को यो सही गरौं - यसको सीमाना हेरचाह गर्न, तर पनि आफ्नो घर संग सम्पर्कमा आए र बन्द जापान दिन को एक जोडी माथि देखाए मार्च को बस पोत आठौं छ। त्यहाँ पनि चालक जाहिर छ, यसलाई केही समस्या थियो समय उतरा र पनडुब्बी नाउ मर्मत गर्न गए। किनभने सम्बन्ध छ, सायद, छैन बाहिर आउन, सबै हुन सक्छ समुद्रलाई - यो तपाईं पनि पूर्ण सामान्य छ, सहमत हुनेछन्। तर यो को विलक्षणता, र, केही स्रोतहरु अनुसार, चालक दल एक गैर-खुलासा कागजातहरू साइन इन गर्न बाध्य भएको थियो। साथै, पनडुब्बी त्यसपछि छैन धेरै वर्ष को लागि एक मिशन मा जाने थिएन। घटनाहरू एक कट्टरपंथी संस्करण सोभियत को कार्यहरू र केही कारणले गुप्तचर एक अमेरिकी पनडुब्बी यसको वस्तु निगरानी rammed भनी उल्लेख। सायद, त्यो मूल उद्देश्यले भएको थियो।
निस्सन्देह, यो त पनि प्रश्नहरू खडा, तर अमेरिकी सरकारले स्थिति यसरी व्याख्या गरेको छ: आफ्नो पनडुब्बी एक हिमशैल संग collided को लापरवाही मार्फत। र सबै यो केन्द्रीय प्रशान्त महासागर मा भयो बाहेक, र त्यहाँ सामान्यतया किनभने एक बरफ ब्लक विकल्प टकराव को छैन सामना icebergs तुरुन्तै गिरा भएको थियो, र K-129 को आदर मा पनि, राम्रो हुनेछ।
आज को दुखद घटनाहरु मा अमेरिका को संलग्नता सम्भव छैन प्रमाणित गर्न, यो राम्रो हुन सक्छ कि यो सबै - मात्र एक अनुमान र संयोग को एक श्रृंखला, तर यो एक अनुभवी चालक, एक पटक यस्तो यात्रा मा भएको छैन जो, त्यसैले ignominiously मृत्यु धेरै अनौठो छ।
अर्को संस्करण अघिल्लो एक देखि निम्नानुसार। यसलाई देखि बढ्नु, हामी त्यहाँ दुर्घटनामा थियो, टोली दुवै पनडुब्बी जहाजहरू कुनै खराब मनसाय थिए मान गर्न सक्नुहुन्छ: एउटै क्षेत्र patrolling गर्दा तिनीहरूले पानी collided। अब यस्तो कल्पना गर्न गाह्रो छ, तर बीसौँ शताब्दीको साथै उपकरण ल्याउन सकिएन।
कुनै पनि मामला मा, घटनाहरु हाम्रो छलफल को परिणाम प्रसिद्ध छ: सोभियत डिजेल पनडुब्बी उत्तर प्रशान्त महासागर मा भुइँमा थियो, बाह्र सय माइल मा कामचट्का प्रायद्वीप मा आधार टाढा। को पनडुब्बी थियो जो मा गहिराई, पाँच हजार मिटर छ। डुङ्गा पनि keel संग sank। छिटो मृत्यु महसुस गर्न, यो एक संलग्न चिसो पानी भरिएको ठाउँ मा चालक दल थियो कसरी भयानक कल्पना गर्न डरलाग्दा।
तल देखि भारोत्तोलन
तर शक्ति को दुःखी घटना पूर्ण भूल ठान्छन् छैन। केही समय पछि, ठीक सागर तल बाट K-129 जुटाउने क्रममा, रूपमा दुई विशेष जहाज धेरै रूपमा निर्माण गरेका थिए। , यो परियोजना स्कोप जो बिल्कुल व्यास K बराबर थियो तल, साथै निकाय बढी एक pincer जस्तै छ जो एक विशाल यांत्रिक "हात", संलग्न थियो, धक्का छ एक डकिंग क्यामेरा HCC-1 - तिनीहरूलाई एक अत्यधिक प्रशंसित "Eksplorer" र दोस्रो थियो -129। पाठक यो सोभियत उपकरण थियो कि छाप भने, तिनीहरूले गलत थिए। यो त छैन। यी परियोजनाहरू विकास र संयुक्त राज्य अमेरिका मा निर्मित गरिएका छन्। डिजाइन लागि पश्चिम र पूर्वी तट मा सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरु जोडिएको थियो।
एक रोचक तथ्य पनि डिजाइन मा काम विधानसभा एड्स ईन्जिनियरहरु अन्तिम चरणमा, के ठीक उनि काम को कुनै विचार थियो भन्ने छ। तर आफ्नो काम कुनै एक protested किनभने, राम्रो भुक्तानी भएको छ।
यो सञ्चालनको मात्रा कल्पना गर्न कठिन छ। को तथ्याङ्क लागि बस: एक विशेष जहाज-को मिसिन "Eksplorer" एक विशाल अस्थायी को विस्थापन जो तीस-छ टन भन्दा बढी मंच, जस्तो। यो मंच द्वारा taxiing संलग्न थियो रोटरी इन्जिन टाढाको नियन्त्रण मा। कारण यो, यो एकाइ सही कुनै पनि इच्छित सागर भुइँमा समन्वय र त्यसपछि आयोजित सकिएन यसलाई माथि, त्रुटि मात्र दस सेन्टिमिटर छ पत्ता लगाउन। यस मामला मा, यस Colossus मा व्यवस्थापन संग कुनै समस्या थिएन।
र सबै छ: प्लेटफर्म एक टाढैबाट तेल रिसाव अस्थायी resembling संरचना घेरिएको, केन्द्र मा "पिट", संग सुसज्जित थियो; प्रत्येक जो बीस-पाँच मिटर एक लम्बाइ थियो बलियो मिश्र धातु बनेको ट्यूब,; विशेष उपकरण को मद्दतले तल sank जो विभिन्न संकेतक, को सेट। जहाज यस प्रकारको पहिले अस्तित्व छैन।
सञ्चालन चुपके सञ्चालन र तीन सरल कदम शामिल थियो। मिति, जानकारी यसलाई सार्वजनिक डोमेनमा भएको घटना बारे जानकारी पाउन सम्भव छ, किनभने declassified छ।
चरण 1 सत्तरी-तीन सुरुमा ठाउँ लिए। पहिलो, तयार र परीक्षण लामो समय को लागि प्रविधी, सञ्चालन धेरै जोखिमपूर्ण, किनभने त्रुटि हुन सकेन थियो। यस मामला मा, एक विशेष मंच को आन्दोलन को लागि तेल उत्पादन मा विशेषज्ञता प्रयोग मार्कर अन्तर्राष्ट्रिय जहाज राख्न। कुनै प्रश्न होइन जहाज विगतमा जलयात्रा जहाज छन्। तर यो केवल तयारी थियो।
चरण2- वर्ष को दोस्रो आधा, दृश्य मा अब सबै आवश्यक प्राविधिक उपकरण र विशेषज्ञहरु थिए। तर यो पर्याप्त छैन थियो। त्यो क्षण यस्तै सञ्चालन बाहिर कहिल्यै नभएसम्म गरिएको, सागर तल्ला देखि जलमग्न पनडुब्बी कल्पना को कगार मा केहि विचार थियो प्राप्त गर्न। प्रशिक्षण काम यस अवधिमा।
चरण3- सत्तरी-चौथो वर्ष। वर्ष को सुरुमा त्यहाँ लामो-प्रतीक्षा रिकभरी छ। सबै काम सबभन्दा छोटो सम्भव समयमा बाहिर थिए र कुनै पनि कठिनाइ उत्पन्न भएन।
संदिग्ध धेरै, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय जहाज बस जलमग्न K-129 माथि खसे कि वास्तवमा थियो सोभियत सरकार, राम्ररी हेर्नुभयो वर्ग को डाटा। साथै, प्रश्न खडा: किन तेल छ किलोमिटर टाढा एक गहिराई मा सागर को बीचमा भइरहेको छ? छैन धेरै तार्किक, सामान्यतया ड्रिलिंग दुई सय मिटर र धेरै किलोमिटर गहिराइमा मा भयो किनभने - यो नसुनिएका छ। पोत बारी मा, संदिग्ध केही छ, छैन, काम सम्पूर्ण विशिष्ट, को airwaves कुरा पनि गरेका थिए, केही विशेष र बिल्कुल सामान्य छ छ हप्ता मा, यो बिन्दुबाट सारियो र योजना पाठ्यक्रम जारी छ।
तर ती दिनमा भरोसा अमेरिका स्वीकार गरेको दृश्य गति डुङ्गाबाट एक फौजको जाचबुभ्क समूह गयो किनभने, यो तथ्य बारे रेडियो छैन उल्लेख गरिएको छ गर्नुपर्छ। ट्र्याकिङ स्थापित गरिएको छ, तर यहाँ भइरहेको छ त जायका अमेरिका, यो सम्भव थियो किन राम्ररी मात्र बुझ्छु। अमेरिकी याद ट्रयाकिङव्यस्तछ, तर काम गर्न जारी गर्दा, यदि केही भयो थियो रूपमा गऱ्यौ। विशेष गरी कुनै एक लुकाउने छ, र दुवै पक्ष को कार्यहरू धेरै आषा थिए। यी तटस्थ पानी, पानी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न निषेधित छैन: एक लामो समय को लागि यो अमेरिकी नाभिकहरु, तेल को लागि खोज जो मा, वास्तवमा, हरेक सही थियो छन् देखिन्थ्यो। पछि एक हप्ताको साढे डुङ्गा बिन्दु बन्द सारियो र होनोलुलु मा ओआहु को द्वीप लागि लाग्यौं। त्यहाँ पहिले नै यो भविष्यमा निगरानी कुनै परिणाम दिन हुनेछ स्पष्ट थियो किनभने, क्रिसमस पर्वहरू आउँदै छन्। साथै, सोभियत जहाज बाट इन्धन को घटाव पहिले नै थियो, र यो मात्र सप्ताह प्रगति को एक जोडी छ भ्लाडिभास्तोक, मा अभ्क तेल हाल्नु गर्न सम्भव थियो।
यो shadowing कुनै परिणाम ल्याए, यो पहल तनावपूर्ण थिए अमेरिका संग सम्बन्ध सहमत र यति रोक्न थियो, र प्रयोग राम्रो एक तुक्के ~ से हुन बाहिर बारी सक्छ चालक दल को सोभियत मृत्युको ठाँउ छ। धेरै कम से कम, संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक गलत केही गरेको। सरकार को मूड पक्रने, को निगरानी को स्थानीय आदेश (केवल सञ्चालनको दोस्रो चरण मा तपाईंलाई थाहा रूपमा, र जो थाह सायद, र गणना गरिएको छ) रोकिएको छ।
र, को पाठ्यक्रम, सोभियत संघ कुनै एक र अमेरिकी जहाज धँसा डुङ्गा जुटाउने प्रयास गर्दै छ कि यो साँच्चै असम्भव देखिन्थ्यो छ कल्पना गर्न सकेन। किनभने शंका अधिकारीहरूले स्पष्ट थियो: अमेरिकी गर्न सक्नुहुन्छ कि?
त्यो केवल सबै नै अमेरिकी असामान्य आकार र विशाल आकार को क्रिसमस पछि पोत छ, एकचोटि फेरि बिरामी-fated बिन्दु गए। साथै, जो कोहीले अघि जहाज यस प्रकारको कहिल्यै देखेका थिए। र यो साँच्चै शंकास्पद देखिन्थ्यो गर्नुपर्छ।
हामी पनडुब्बी K-129 अमेरिकी गर्न किनारा, सबै भित्र थिए (छ को) शरीर बुझाइएको थियो, अमेरिका को अधिकारीहरु गर्न आदर तिर्न पर्छ बित्तिकै नाभिकहरु द्वारा समुद्र मा गाडे थिए अनुष्ठान गर्न भर, यो अमेरिका पनि सोभियत संघ को राष्ट्रिय गान समयमा समावेश। दफन अमेरिकी समाचार एजेन्सीहरूले पठाइएको थियो जो रंग फिलिम, मा कब्जा भएको थियो। मरेका अमेरिका को व्यवहार र मनोवृत्ति धेरै आदर थिए। जहाँ सोभियत को चालक दल सदस्य बाँकी, तर, अमेरिकी डाटा अनुसार, तिनीहरूले एक पनडुब्बी मा गएको थियो यो अझै पनि अज्ञात छ। बाटो, र वी आई Kobzar reburied बीच अनुपस्थित द्वारा।
सोभियत संघ के भइरहेको थियो थाह थियो समय द्वारा, म दुई राज्य दिग्गज बीच कूटनीतिक संघर्ष को एक नयाँ दौर सुरु भयो। सोभियत संघ अमेरिका को भाग मा दुखी गुप्त कार्य थियो र डिजेल पनडुब्बी सोभियत थियो, र त्यसपछि अमेरिका यसलाई तल बाट निकाल्न कुनै अधिकार थियो। अमेरिकी पनि पनडुब्बी को मृत्यु, जो यो कुनै एक गुण छ र उसलाई फेला जो आफ्नै विवेकमा कार्य गर्न सक्छ भन्ने हो, (यो साँचो हो) कहीं रेकर्ड थिएन कि दावी। साथै, कुनै पनि थप छलफल जोगिन, अमेरिकी पक्ष रूसी नाभिकहरु को भिडियो टेप reburial प्रदान। तिनीहरूले साँच्चै आदरपूर्वक र नियम अनुसार गाडे। किनभने सोभियत पक्ष बाट अनावश्यक प्रश्नहरू गायब।
तर अझै पनि किन यो सबै गोप्य गरे र अमेरिका यो समुद्र को तल देखि प्राप्त गर्न धेरै प्रयास राख्नु छ किन पनडुब्बी, साँच्चै के भयो रहस्य, छ किन, पछि यस कार्यका मरम्मत नाउ को अमेरिका भुमरीमा दृष्टि बाहिर "Eksplorer" लुकाइएको थियो यो एक धेरै उपयोगी साधन हो किनभने। प्रविधी सैन नजिकै कतै सोभियत पनडुब्बी साथ सँगै राखे।
सायद अमेरिकी पक्ष बस सोभियत संघ को पानी छिटो लुकाउन कि रहस्य जान्न चाहन्थे। यसलाई अब अमेरिका सोभियत उपकरण छानबीन गरेको स्पष्ट छ किनभने केही गर्न यो सोभियत सरकार अन्तमा झुक्काएका थियो, जस्तो लाग्न सक्छ, यो पनि सम्भव छ के तिनीहरूले रोचक फेला, र केहि तिनीहरूले अँगालेका छन् केही भन्ने। सायद, एकदम शिष्ट सिर्जना जो थिए, र गर्न सक्छन्, र अन्य रहस्य torpedoes। तर, समकालीन स्रोतहरू अनुसार, मुख्य antagonists त प्राप्त र सकिनँ। र सुखी संयोग सबै दोष: को चालक दल कमान्डर व्लादिमीर Kobzar माथि उल्लिखित धेरै अग्लो थियो र एक पुष्ट गठन स्पष्ट कारण उहाँले नजिक थियो, किनभने काम को ठाउँमा थिए। डुङ्गा फेरि मरम्मत गर्दा कप्तान कडा ईन्जिनियरहरु कोड-काटन मिसाइल कक्ष मा राख्न आग्रह गरे, त्यहाँ एक जोखिमपूर्ण छिमेकी थियो तापनि, थप स्थान थियो। त्यसैले, सबै भन्दा महत्वपूर्ण जानकारी त्यहाँ भण्डारण गरिएका। तर पनडुब्बी तल बाट निकाल्दा पनि अमेरिका, को मिसाइल बे उठाउनु भएन। यो यति महत्त्वपूर्ण तिनीहरूलाई देखिन्थ्यो।
यसलाई अन्य रुचि होइन, तर कहिलेकाहीं यो हामीलाई पनि हात मा छ: रूसी वास्तविकता - 1968 त्यस्तो छ कि देखाउनुभयो। Samu पनडुब्बी अमेरिका, पाठ्यक्रम, सोभियत पक्ष, फिर्ता भएन उनको भविष्य रहस्य रहिरहन्छ पनि। बरु, यो, disassembled थियो राम्ररी अध्ययन र उपयोग। तर बदलामा, कुनै एक लागि आशा थियो। सायद यो धेरै पैसा र प्रयास बस अमेरिका खर्च गरिएको छ, किनभने निष्पक्ष छ।
खैर, यी पनि छैनन् सुखद अनुभव मात्र हतियार दौड र प्राविधिक नवीनता शह। अरू - अनुभव केही तरिका एक बलियो भन्दा राज्य, र केही कुरा भनेर देखाइएको छ किनभने। शायद यो मा विज्ञान सबै प्रगति विकास गर्न मानवजातिको प्रमुख भएपछि, त्यसैले खराब छैन।
र यो धेरै अस्पष्ट रहनेछ। नाभिकहरु किन पनडुब्बी अनुभवी र प्रतिभाशाली कप्तान संग स्पष्ट कारण बिना sank? अमेरिका किन यति धेरै पैसा र सागर तल बाट यो टिप्न मिसिन निर्माण गर्न प्रयास बिताएका छन्? के यो किनभने समान गर्न सकिएन कहीं बाहिर, टोलीमा बढी भाग थियो यो बन्द स्पेस भाग्ने सय एक भन्दा बढी मान्छे? यो समुद्र को गहिराइमा देखि झिकिएको छ पछि के K-129 भयो? को बीसौँ शताब्दीमा पनडुब्बी जहाजहरू को मृत्यु, पाठ्यक्रम, असामान्य छैन थियो, तर यो मामला मा यो unsolved प्रश्नहरू धेरै छ।
हाम्रो कथा सुरु जो फिलिम, मा, त्यहाँ सबै प्रश्नहरूको जवाफ छ। आफ्नो अमेरिका-रूसी, जो, पाठ्यक्रम को निर्माताहरू घटनाको सबैभन्दा उद्देश्य समीक्षा को लागि अभिप्रेरित, यो, उल्लेख गर्नुपर्छ को उत्पादन। bygone दिन को मामला, र केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ - तर शायद अब यो त महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने यो सबै छ। शीत युद्ध bloodless, र रूपमा मानव इतिहासको अन्य युद्ध रूपमा खतरनाक छैन, तर अप्रिय कुराहरू पर्याप्त हुन मानिन्छ। जो माथि पनडुब्बी K-129 को चालक दल आफ्नो पहिलो गम्भीर पौडी गए जो विशेष गरी युवा नाभिकहरु, गरे, र मानिसहरूको लागि धेरै दु: खी। कुनै पनि मामला मा, यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सधैंभरि रूसी मान्छे को इतिहास र स्मृति को वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास रहनेछ।
को सोभियत संघ मा टन के हो? सामूहिक को प्रविधी सुनिश्चित लागि प्रक्रिया
महिमित क्रान्ति (महिमित क्रान्ति)। 1688 को महिमित क्रान्ति
Maykl इमर्सनले: जीवनी, उत्कृष्ट भूमिकाको
सबै भन्दा राम्रो फिल्म लियोनार्डो DiCaprio: सूची। DiCaprio संग सिनेमा: विवरण, समीक्षा, कथा, र समीक्षा
रूस को राष्ट्रपति को तलब: आधिकारिक डाटा र अनुमान
नमूना Rufe र शारीरिक शिक्षा कक्षाहरू
वातानुकूलन: विगत र वर्तमान
सुबारु वनपाल 2013 - आफ्नो वर्ग को एक शक्तिशाली प्रतिनिधि
कसरी जीवनकालमा को विवाह रात बनाउन।
ठूलो भाँडाको बाल्टीमा उज्ज्वल ताराहरूको संख्या। तारामण्डल उर्सा मेजर मा कितने ताराहरु
मोन्टेनेग्रो - एक शानदार स्थान छ जो?
हामी आर्थोपेडिक तकिया छनौट गर्छौं। खरिदहरू र डाक्टरहरूको प्रतिक्रियाले हामीलाई मदत गर्नेछ
ग्रन्थीहरूको पसिना: उनि के गर्दै छन्, के तिनीहरूले हटाउन सकिँदैन कि, बिरामी छन्
अपरेटर को कार्यालय जा बिना तपाईं कसरी मेघाफोन लागि महसुल थाहा छ?
डिजाइन र विनिर्देशों "होन्डा-नागरिक"